musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Chikafu Yeuka Yambiro kune Vanofara Veggie Yenyika Brand
Global Vegetarian Foods Corp iri kurangarira Happy Veggie World brand Vege Chicken Chipfuva uye Vegefarm brand Vege Stewed Gwayana Chunk kubva pamusika nekuti inogona kunge iine zai risingaziviswe pachiratidzo. Vanhu vane allergies kune zai havafanirwe kudya izvo zvinorangarirwa zvigadzirwa zvinotsanangurwa pazasi.
Yambiro yekurangarira chikafu yakaburitswa muna Gumiguru 14, 2021, yakagadziridzwa kuti iwedzere ruzivo rwekugovera. Rumwe ruzivo rwakawonekwa panguva yeCanadian Food Inspection Agency's (CFIA) kuferefetwa kwekuchengetedza chikafu.
Izvi zvinotevera zvigadzirwa zvatengeswa muAlberta neBritish Columbia uye zvinogona kunge zvakagoverwa kune mamwe matunhu nematunhu.
Anofara Veggie Nyika Vege Chicken Chipfuva 4 bv 131218 Makodhi ese uko zai risingaziviswe pane zvakanyorwa
Vegefarm Vege Stewed gwayana chunk 3000 d 4 713224 372285 Makodhi ese uko zai risingaziviswe pane zvakanyorwa
Tarisa uone kana iwe uine izvo zvinorangarirwa zvigadzirwa mumba mako. Zvigadzirwa zvinorangarirwa zvinofanirwa kukandwa kunze kana kudzoserwa kuchitoro kwazvakatengwa.
Kana iwe uine allergies kune zai, usadya izvo zvinorangarirwa zvigadzirwa sezvo zvinogona kukonzera zvakakomba kana kutyisidzira hupenyu kuita.
Uku kuyeuka kwakakonzerwa nekambani. Iyo CFIA iri kuitisa ongororo yekuchengetedza chikafu, izvo zvinogona kutungamira kurangarirwa kwezvimwe zvigadzirwa. Kana zvimwe zvigadzirwa zvine njodzi zvakanyanya zvikarangarirwa, iyo CFIA inozivisa veruzhinji kuburikidza neyakagadziridzwa Kudya Kurangarira Yambiro.
ICFIA iri kuratidza kuti indasitiri iri kubvisa zvigadzirwa zvinorangarirwa kubva pamusika.
Pakave pasina kwakaitika maitiro ane chekuita nekudyiwa kwezvigadzirwa izvi.